चीन, नेपाल र भारत
के भारत र चीनका वीच आ–आफना देशका केही भू–भागमाथि सैनिक लगायतका हस्तक्षेप भएको कारणले मात्र अविश्वास र शत्रुवत तरंगहरु उठेका हुन ?
यो साता विश्व–राजनीतिमा दुइ महत्वपूर्ण घटना भएका छन । यी दुवै घटना एशियामा भएका छन । समयको लामो र कष्टकर अन्तरालपछि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जाय इन र उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किम जोङ उनले पहिलो पटक प्रत्यक्ष भेटवार्ता गरेका छन । एउटै देश भएर पनि दुइवटा सार्वभौमिक अस्तित्वमा वाँडिएका यो देश एकताको सूत्रमा वाँधियो भने मानव अस्तित्वका लागि यो साह«ै ठूलो योगदान हुनेछ ।शान्ति स्थापनाले नै अन्ततः कोरियाली भूमिलाई एकवध्द वनाउनेछ । यही कारण हो उत्तर र दक्षिण दुइ कोरियाका राष्ट्रपतिको भेटवार्ताले शान्तिका आकांक्षाहरुलाई वढाएका छन । दक्षिण सहित सम्पूर्ण एशियाई भूखण्ड युध्द, हस्तक्षेप, आतंक र गरीवीको विद्रूप छायाँ, पारस्परिक आशंका र त्राशबाट उम्किन सफल भएमा यो शताव्दीमाथि एशियाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक वर्चस्व व्हात्तै वढनेछ । एक्काइशौं शताव्दी शान्ति सहयोग र विकासको शताव्दीका रुपमा स्थापित हुनेछ । हेर्दा पृथक देखिएपनि विवादको यही कडीमा पर्ने र कडा स्वभाव भएको यो साताको अर्को महत्वपूर्ण घटना हो ः भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिंग पीनवीचको भेट–वार्ता । वुहान–वार्ताको रुपमा चर्चित भारत–चीन वार्ताको सफलताले विश्व शान्ति र एशियाको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्नेछ । भारत र चीनका राष्ट्रप्रमुखहरु यो पटक विना कार्यसूची भेट गर्दैछन । दुवै देशका नेताहरुले आफनो भेट र वार्तालाई अनौपचारिक राख्न खोजेका छन । भारत र चीनका वीचको छ दशकभन्दा लामो कटुता एशियाको विकासको लागि अवरोधक वनेको छ । भारत र चीन शान्तिको पक्षमा नआएसम्म नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान र बांगलादेशका वीचको प्रेमालाप मात्रले केही हुने वाला छैन । दक्षिण एशियाका उल्लेखित राष्ट्रहरुको विडम्वना नै यही छ कि भारत र चीनका वीच सम्वन्ध नसुध्रिएसम्म यहाँको आर्थिक जागरण सम्भव छैन । आर्थिक विकासका विषयमा चीन र भारतका वीच सहमतिको राजनीति शुरु नभएसम्म क्षेत्रीय विकासको परिकल्पना नै अर्थहीन हुनेछ । भारत र चीनले सभ्यता, संस्कृति र समृध्दिमा दुवै देशको दृष्टिकोण समान भएको स्वीकारगर्दै आएका छन । खाली ऐतिहासिक प्रमाण–प्रमेयका लागि मात्र उनीहरुले यो कुरा स्वीकार गरेका हुन भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । होइन भने, दुइ देश वीचको सम्वन्धमा सामयिक परिवर्तन ल्याउनका लागि दुवै देशले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो यो । अहिलेको युगमा सभ्यता र संस्कृतिको उत्तराधिकारको खोजी जरुरी छ । अझ, समान प्रकृतिका सभ्यता र संस्कृतिहरुको समीकरणले आधुनिक सम्वन्धलाई वलियो वनाउने मान्यता स्थापित भै सकेकोछ । भारत र चीन वीचको कुन विवादमा नेपाल कहाँ छ ? भारत र पाकिस्तानका वीचको विवादमा चीन कहाँ छ ? यी विषयहरुको संश्लेषण नगरी आफना विचार राजनीतिक हिसावले नै लादी हाल्ने चलन छ हाम्रो देशमा । निश्चय पनि, यो गतिलो चलन होइन । पछिल्लो समयमा विश्वको पहिलो शक्ति राष्ट्रका रुपमा अगाडि वढन खोजेको चीनले पक्कैपनि प्रतिष्ठाको मूल्य वुझेकोछ । चीनलाई यो थाह छ आफनो दक्षिणी सीमा केरुङबाट काठमाडौं–पोखराहुँदै कपिलवस्तुसम्म रेलमार्ग वनाउनु कठिन भएपनि असम्भव छैन । तर, कपिलवस्तुबाट परसम्म निकास भएन भने त्यो रेलको कुनै काम छैन ।त्यसले नेपालमा वसहरुको अखडा मुग्लिन भएजस्तै रेलका लागि एउटा ठूलो जंक्सनका रुपमा अर्को मुग्लिनको विकास गर्नेछ ।भारत र चीनका वीच मैत्री र शान्तिको युग शुरुहुनु त्यति सजिलो पनि छैन । भारतका पहिला प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरुको समय सन १९६५ देखि शुरु भएको दुुइ देश बीचको विवादको रुपलाई नियाल्दा दुइ कोरियाको मिलन निकै छिटो सम्भव होला । भारत र चीनवीचको जटिलता छिटै सकिने विश्वासगर्नु अत्यन्त कठिन हुन्छ । के भारत र चीनका वीच आ–आफना देशका केही भू–भागमाथि सैनिक लगायतका हस्तक्षेप भएको कारणले मात्र अविश्वास र शत्रुवत तरंगहरु उठेका हुन ?परिवर्तित समयमा यो तर्कलाई स्वीकारगर्न कोही तयार नहोला । एशियामा दुइ दर्शन, दुइ सभ्यता, ती तरंगहरुलाई साम्य पारेर दुइ देशका वीच शान्तिपूर्ण सम्वन्धलाई यथास्थानमा ल्याउन दुइ देशका नेताहरु वीचको सम्वन्धमा सुधार आउनु पर्दछ । मोदीको चीन भ्रमणले त्यो सम्भावनाको खोजी गरेको छ जसमा पर बाट हेर्दा सीको पनि पूरै सहमति देखिन्छ । यसपटक वुहानबाट फर्किदा भारत र चीन दुवै देशका नेताले आ–आफनो पिठ्यूँमा वोकेका अतिरिक्त वोझ र आग्रहहरु उतैका नदीमा फेंकेर फर्किएलान भन्ने आशागर्न सकिन्छ । किनभने, संसारमा आशा भन्दा ठूलो शक्ति अर्को हुँदैन । भारत र चीनले छिमेकका गरीव र अविकसित जनताप्रति अलिकति कर्तव्य वोध गरेर शान्तिका पक्षमा उदार नीति र न्यायोचित प्रवृत्ति प्रारम्भ गर्न सकेभने दक्षिण एशियाका साना मुलुकका लागि समृध्दि टाढाको कुरा होइन ।नेपालमा भारतकाप्रति सतही दृष्टिकोणराख्ने राजनीतिक दल, अभियन्ताहरु, आन्दोलनकारीहरुको कमी रहेन । प्रजातन्त्र स्थापनापछिका समयमा यो प्रवृत्ति वढेको छ । नेपालको संविधान लेखन हुँदैगर्दा प्रादेशिक साँध सीमानाको विषयमा भएको आन्दोलनमा थुप्रै मानिसको मृत्यु भयो । त्यसैवेला भारतले अघोषित ढंगले नेपालका विरुध्द नाकावन्दी गर्यो । यो नाकावन्दी र आन्दोलनको परिणाम पक्कै पनि राम्रो आएन । भारतका प्रति नेपालीको मनमा नमिठो र गहिरो टीस उत्पन्न भयो जुन स्वाभाविक थियो । यो आन्दोलनमा सरीक भएको मधेशी समुदाय र उसका समर्थकहरुले ठोस उपलव्धि प्राप्तगर्न सकेनन । मधेशका मांगहरु संकुचित भए । अहिले पनि मधेशमा असन्तोष छ । यसको संवोधनगर्न कसैले सकेका छैनन । यो नेपालको आन्तरिक समस्या हो । यो पटकको भ्रमणमा राम–जानकीको पूजा–अर्चना र दर्शनका लागि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुरधाम जाने कार्यक्रम रहेको वताइएको छ । मोदीको जनकपुरधाम भ्रमणकोे महत्व निकै वढी छ । मोदीको जनकपुरधाम भ्रमणले नेपाल र भारतका वीच सांस्कृतिक सदभाव वढाउने त छँदैछ । यसका अतिरिक्त जनकपुरधाम र यो संग जोडिएका विन्दूहरुको विकासमा भारतले के योगदान दिनेछ ? त्यतातिर पनि सवैको दृष्टि तानिएकोछ । तीक्ष्ण वुध्दिका, वैदिक सभ्यताका अनुयायी तथा विव्दान व्यक्तित्वका रुपमा चिनिएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आगामी भ्रमण मार्फत नेपालीका मनमा भारतकाप्रति रहेका दहसत, भय, क्रोध र आक्रोश जस्ता घाउको उपचार गर्नुछ । यी घाउहरु नाकावन्दीका समयदेखि लागेका हुन ।नेपाल–भारतसम्वन्धमा जतिसुकै ठूला उतार चढाव भएपनि सम्वन्ध अहिलेजस्तो तल्लो स्तरमा खस्किएको थिएन । नाकावन्दीपछिवृहत्तर नेपाली समाजमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नाम खलनायकका रुपमा निकै प्रचलनमा ल्याइएकोछ । यो निश्चय पनि राम्रो कुरा होइन । प्रधानमन्त्री मोदी र उनका शुभचिन्तकले यसमा ध्यानदिनु जरुरी छ ।